ကမ္ဘာ့ဝင်ရိုးစွန်းများ ရွေ့လျှားခြင်း (poles shifting) - ၁ | Myanmar Astronomy
Posted by ခွန်း at 8:44 AM Labels: Astrophysics, ခွန်း
ကမ္ဘာ့ အပူချိန် ပြောင်းလဲ မှုကြောင့် ဂရင်းလန်ကျွန်းကရေခဲတွေ အရည်ပျော်ရင်
ကမ္ဘာ့ ရေမျက်နှာ ပြင် မြင့်တက်လာမယ်
လို့ဆိုထားတာ... အခုမဟုတ်တော့ ပြန်ဘူးဆို
အဲကိစ္စက astronomy နဲ့ သိပ်မဆိုင်ပါဘူး။ အဲဒါက သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေးနဲ့ ပိုပြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။ သစ်တော ပြုန်းတီးမှု၊ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်နဲ့ CO2 ထုတ်လွှတ်မှုတွေ နဲ့ သက်ဆိုင် ပါတယ်။ လမ်းကြောင်းလွဲသွားမှာ စိုးလို့ astronomy နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ပြီးတော့ ပဲ အဲဒီ အကြောင်း ကို ဆွေးနွေးပေးပါမယ်။ အခု လူတွေ စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ဟာ ကမ္ဘာပျက်မယ့်နေ့ (Doomsday) လားဆိုတဲ့ အကြောင်း ကျနော် ရေးပါမယ်။ အဲဒီကျရင် ဂြိုဟ်တွေ ရဲ့ သက်ရောက်မှု အကြောင်း ဖတ်ရမှာ ပါ။ comment ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
sea level changes ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကသမိုင်းခံပြီးတော့ ဖြစ်ပျက်နေခဲ့ ပါတယ်။ ကိုခွန်းပြောသလိုပဲ ဒီကိစ္စက astronomy နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး။ သို့သော် environmental science ပါ။ Oceanography ဘာသာရပ်နဲ့တော့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ မြင်နေရတဲ့ sea level ကလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာနဲ့ ယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင်.....အများကြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါပြီ။ sea level changes ဟာချက်ခြင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဖြစ်ရပ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်သန်းပေါင်း များစွာ ကြာပြီးမှ ၁ မီတာ အမြင့်လောက်ဖြစ်လာတာပါ။ sea level ဟာပြန်ကျသွားတယ်ဆိုတာတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာရဲ့ record တွေအရ ဖြစ်တောင့် ဖြစ်ခဲပါ။ ဆိုချင်တာကတော့ sea level ဟာဆက်လက်မြင့်တက်လာနေဆဲပါ။ sea level မြင့်တက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့....
၁။ ရေထုမျက်နှာပြင်ပေါ်က atmospheric pressure
၂။ rain fall
၄။ ကမ္ဘာ့မြေလွှာများ တွန်းတိုက် ရွေ့လျားမှု
၅။ Global warming ကြောင့် ရေခဲများ အရည်ပျော်လာမှု
စတဲ့ အချက်တွေကြောင့် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ချက်ခြင်းဆီကို ပြန်ရှင်းမယ်ဆိုရင်....
ရှင်းစရာတွေအများကြီးရှိပေမယ့်..... ကျွန်တော်အကျယ်မချဲ့လိုတော့ပါ။ Ozone လွှာပေါက်ပြဲမှု ကြောင့် Global warming မြင့်တက်လာရတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာ... sea level မြင့်တက်လာမှုကို ကောင်းကောင်း အထောက်အကူပေးနိုင်တဲ့ အချက်လို့ သိပ္ပံပညာ ရှင်အတော်တော် များများကလက်ခံထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေခဲများ အရည်ပျော်ခြင်းကြောင့် sea level မြင့်တက်လာခြင်းဟာ မှန်ကန်တယ် လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
sea level changes အကြောင်း လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် စာအုပ် ၂ အုပ် ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ e_book တော့ကျွန်တော့်မှာ မရှိပါ။
1. sea level changes, EUGENIE LISITZIN, ELSEVIER OCEANOGRAPHY SERIES.
2. THE RISE AND FALL OF THE SEAS, RUTH BRINDZE